Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Sidina tsy miato avy any Toronto mankany Dublin amin'ny WestJet izao
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany Brezila • Vaovao Mafana Irlandey • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Ireo sidina ireo dia hanamafy ny fifandraisana ara-barotra sy fialamboly eo anelanelan'i Kanada sy Irlandy ary hampitombo ny fifandraisana eo amin'ny tsena roa lehibe.
Ireo sidina fizaran-taona tsy an-kijanona dia natao hiasa in-efatra isan-kerinandro, manomboka amin'ny 15 Mey 2022.
Ny serivisy fanokanana ataon'ny WestJet eo anelanelan'i Toronto sy Dublin dia hiasa amin'ny fiaramanidina Boeing 737 MAX an'ny WestJet.
Ireo sidina dia hanasongadinana ny tranoben'ny Premium vao nohavaozina, izay manome sehatra manokana momba ny fiainana manokana sy fiononana.
Manomboka amin'ity lohataona ity, WestJet dia hanome safidy ho an'ny vahiny bebe kokoa hifandraisany amin'ny tobin'ny seranam-piaramanidina Toronto miaraka sidina vaovao eo anelanelany Toronto ary Dublin. Ireo sidina fizaran-taona vaovao tsy an-kijanona dia kasaina hatao inefatra isan-kerinandro, manomboka amin'ny 15 Mey 2022 ary hitombo isan'andro hatramin'ny 2 Jona 2022.
"Rehefa mihabetsaka ny fangatahana, fantatray fa ireo mpitsangatsangana dia mitady safidy mety sy mora ho an'ny dia eo anelanelan'i Kanada sy Eropa," hoy i John Weatherill, WestJet Lehiben'ny tompon'andraikitra ara-barotra. “Rehefa manohy mifantoka amin'ny fanitarana ny tamba-jotra izahay Toronto foibe izay anolorantsika toerana iraisampirenena 33, ireo sidina ireo dia hanamafy ny fifandraisana ara-barotra sy fialamboly eo anelanelan'i Kanada sy Irlandy ary hampitombo ny fifandraisana eo amin'ny tsena roa lehibe. ”
Miaraka amin'ny sidina efa manomboka amin'ity lohataona ity, WestJetserivisy fanokanana anelanelan'ny Toronto (YYZ) ary Dublin (DUB) hiasa amin'ny fiaramanidina Boeing 737 MAX WestJet. Ireo sidina dia hanasongadinana ny tranoben'ny Premium vao nohavaozina, izay manome sehatra manokana momba ny fiainana manokana sy fampiononana, ao anatin'izany ny traikefa fisakafoanana mihombo ary ny fanamafisana seza 2X2 lehibe kokoa.
Antsipirihan'ny serivisy fizaran-taona vaovao an'ny WestJet eo anelanelan'i Toronto sy Dublin:
Route Frequency Daty nanombohana Departure Arrival
Toronto - Dublin 4x isan-kerinandro Enga anie 15, 2022 9: 10 ora 8:45 maraina (+1)
Daily Jona 2, 2022
4x isan-kerinandro 1- Oktobra 28 Oktobra 2022
Dublin - Toronto 4x isan-kerinandro Mny 16, 2022 10: 05 am 12: 40 hariva
Daily Jona 3, 2022
4x isan-kerinandro 2 Oktobra - 29 Oktobra 2022
WestJet Airlines Ltd. dia zotram-piaramanidina kanadiana natsangana tamin'ny taona 1994 izay nanomboka niasa tamin'ny taona 1996. Nanomboka ho toy ny fanoloana vola kely amin'ny seranam-piaramanidina lehibe mpifaninana ao amin'ny firenena izany. WestJet dia manolotra serivisy fiaramanidina voarafitra sy charter ho an'ny toerana mihoatra ny 100 any Canada, Etazonia, Eropa, Mexico, Amerika afovoany ary Karaiba. Ny foiben'ilay kaompaniam-pitaterana an'habakabaka dia eo akaikin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Calgary.